अर्गानिक रोज्ने कि रासायनिक मल खोज्ने ? – Akhabar Today
अर्गानिक रोज्ने कि रासायनिक मल खोज्ने ?
इलाम, १९ भदौं । मुलुकभर यतिबेला रासायनिक मल अभाव भएका खबर आइरहेका छन् । रासायनिक मल नेपाल ल्याउन नसकको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नु परेको छ भने मल अभाव भएको भन्दै किसान गुनासो गरिरहेका छन् ।
मुख्यतः पूर्वी जिल्लामा खेती हुने चियाको समस्या पनि अहिले रासायनिक मलकै हो । रासायनिक मल अभाव भएकाले चियाको उत्पादन घट्ने सम्भावना रहेको किसान बताइरहेको छन् । नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नहुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ तर लामो समयदेखि अर्गानिक बन्नुपर्छ भन्ने चिया क्षेत्रमै मलको वियोगान्त कथा सुन्दा अचम्म लाग्छ ।
चियाको अर्गानिकरणका लागि विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गर्न नहुने मुख्य प्रावधान छन् । तर, सधै एकातिर प्राङ्गरिकको नारा धन्किन्छ भने अर्कातिर रासायनिक मलको कोकोहोलो मच्चिरहन्छ । यो समस्या बर्षौंदेखिको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अर्गानिक चियाको माग बढेपनि चिया अर्गानिक नबन्नुचाहिँ अचम्म लाग्दो छ ।
किसान र उद्योगी मात्रैले चियालाई अर्गानिक गर्न नसक्ने भएकाले मल उपयोग गर्नुपरेको किसान र उद्योगीको भनाइ छ । आफूहरूले प्रयास गरिरहेको भएपनि सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग नपाएकाले अर्गानिक गर्न नसकिएको जिल्ला चिया उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङ बताउँछन्, ‘हामीले त वर्षौदेखि यो विषय उठाएका हौँ तर सरकारी क्षेत्रबाट चासो दिइँदैन ।’
रासायनिक मल मात्र होइन, चियामा विषादी समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ । छोटो समयमा धेरै उत्पादन गर्नका लागि किसानले विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । विषादीले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्छ भने मलले माटोको उर्वरा शक्ति कम गर्छ । अर्गानिक एकैचोटी गर्न नसकिने र प्रक्रियागत तरिकाले गर्नु परेकाले लामो समय लागेको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रवीन राईको भनाइ छ ।
छोटो समयमा धेरै कमाइ गर्न खोज्ने किसान र चियामा चासै नदिने सरकारका कारण चिया अर्गानिकमा नगएको राईको दुखेसो छ । वर्षेनी चिया उद्योग प्राङ्गरिक हुने वा प्राङ्गरिक प्रक्रियामा जाने सङ्ख्या बढेकाले मल र विषादी छाडेर अर्गानिकमा जाने क्रम बढ्दो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘अहिले पनि युरोपियन मुलुकमा जाने चिया अर्गानिक चाहिन्छ र किसानले अर्गानिक बनाउँछन् तर भारतमा बिक्ने चियालाई अर्गानिक नहुँदा पनि हुन्छ’ राई थप्छन्, ‘चिया जाने ठाउँबाटै अर्गानिक चियाको माग नआएपछि किसानले मल÷विषादी प्रयोग गरेका हुन् ।’ हालसम्म जिल्लाका १२ वटा चिया उद्योगले अर्गानिक प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । अन्य उद्योग पनि प्रक्रियामा छन् तर अर्गानिक महङ्गो प्रक्रिया र अर्गानिक चियाको छुट्टै मूल्य नपाइने भएकाले किसानले मल प्रयोग गर्ने गरेको अर्गानिक प्रमाणित उद्योगी एवं ग्रीन हिल अर्थोडक्स चिया उद्योग साँखेजुङका सञ्चालक गोपाल दाहाल बताउँछन् ।
‘हाम्रै उद्योग सर्टिफाइ हुन पनि झण्डै रु १० लाख लाग्यो । अनि वर्षेनी नवीकरणका लागि रु तीन लाख लाग्छ’ दाहालले भने, ‘किसानको उत्पादनदेखि बगान सबैको प्रत्यक्ष अनुगमन गराउनु पर्छ । यो सबै रकम उद्योगले नै बुझाउनुपर्छ ।’ किसानमा सचेतना आएपनि अर्गानिक चियाको उच्च मूल्य नभएकाले अर्गानिक बन्न नसकेको देखिन्छन् भने चियालाई चाहिने खाद्य तत्व अर्गानिक मलमा भन्दा रासायनिक मलमा बढी हुनाले पनि किसान रासायनिक मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
सरकारी पक्षबाट अर्गानिकरणका लागि प्रयत्न नहुने र अर्गानिक चियालाई प्राथमिकता नदिने भने अझै लामो समय चियालाई रासायनिक मलमुक्त बनाउन नसकिने देखिन्छ । अर्गानिकभन्दा पनि मल किन्न सहज हुने भएकाले किसानले मल र विषादी प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् सूर्योदय नगरपालिकाका चिया सचिवालय संयोजक देवेन्द्र शर्मा । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नगरबाट त पछिल्लो समय प्राङ्गरिक उन्मुख क्षेत्र भनेर काम नै शुरु गरेको छौँ तर लामो समय चिया क्षेत्रको अर्गानिकका लागि राज्यको चासो नगएकै हो ।’
शर्माका अनुसार नगरपालिकाले सबै बालीमा अर्गानिक बनाउन तीन÷तीन वर्षे पाँच वटा चरण बनाएको छ भने विषादी बेच्ने पसललाई समेत दर्तामा आउन आह्वान गरेको छ । किसानमा सचेतना बढाउदै लैजादा लामो समयपछि विषादीमुक्त बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । (राससबाट)